नेकपा विवाद उत्कर्षमा : स्थायी कमिटी बैठक एजेण्डाबिहीन, यस्तो छ दुवै पक्षको तयारी « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 23 June, 2020 7:15 pm
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकका एजेण्डा तय गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कोरोनाविरुद्धको अभियानमै बैठक केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले समग्र विषयबस्तुमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । त्यो भेटवार्ता स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डामा केन्द्रित भए पनि बैठकले एजेण्डा तय गर्न सकेको छैन । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्षद्वयसँग समन्वय गरेर अहिले पनि भोलिको स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न छलफलमै छन् । तर दुवै पक्षको अडान प्रष्ट भएकाले एजेण्डामै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा मंगलबार बेलुकी ८:०० बजेसम्म पनि तय हुन सकेको छैन । सबै सदस्यहरुलाई बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भन्ने मात्रै सूचना दिइएको छ । पटक-पटक स्थगित हुँदै आएकाले भोलिको बैठक पनि टुंगो नभएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
आफूले सफल तरिकाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दीमा पारिएको ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीले पार्टीका सबै तहका बैठक छल्न खोजेका उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने अवस्था आयो । पार्टी एकतागर्दा बहुमत अल्पमत भन्ने थिएन । अहिले बहुमत अल्पमतका नाममा सबै तहमा समस्या निम्ताइएको छ ।’
तर, ओलीसँग असन्तुष्ट एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी, विधि, प्रक्रिया भन्दा उहाँले एकदुई जनाको सुझावमा मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ । तपाईँले सरकारका राजनीतिक नियुक्ती मात्रै हेर्दा पुग्छ । पार्टी नेतालाई गाली गर्नेलाई उहाँले प्रोत्साहन गरेर के गर्न खोज्नु भएको होला ? उहाँले पार्टी एकता चाहनुभएको छैन । अहिले आत्मघाती एमसिसी पारित गर्न उहाँले जोड बल गरिरहनु भएको छ । उहाँका सल्लाहकारहरुको व्यवहार राजाको जस्तो र बालुवाटार बाहिरका नेता तथा कार्यकर्ता दासको जस्तो छ ।’
दुवै पक्षको तयारी : निरन्तर छलफल
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको तयारीमा दुवै पक्ष लागेका छन् । खासगरी सचिवालयका नेताहरुले प्रष्ट दुई धारमा आ-आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । सचिवालयका ९ जनामा अहिले फेरि समीकरण परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलमात्र रहेका छन् । पौडेलले पनि एमसिसी प्रकरणमा ओलीलाई साथ नदिने अवस्था प्रष्ट भएको छ ।
प्रचण्डसँग भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रष्ट छन् । एमसिसी पक्षमा ओलीले अडान नछाडेपछि गृहमन्त्री थापाले प्रचण्डसँग गएर अब दायाँबायाँ नहुने भन्दै सबैकुरामा साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले बैठकमा ध्यान नदिनु स्वभाविक हो । तर, अहिले एमसिसी पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ओली छन् । उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग एमसिसीका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरेर सिधैँ सदनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सदनले निर्णय गरेको कुरा आफूले मान्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा मतभेद रहेकाले संसदलाई हस्तक्षेप नगरौँ भन्ने र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ ओली हुनुहुन्छ । उहाँले ह्वीप नलगाउने पक्ष-विपक्षमा मतदान गर्न दिने सजिलो निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ । हामीले नबुझेको कुरा किन उहाँलाई एमसिसी नभइनहुने लागेको छ ? यसको जवाफ पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्न । गलत प्रावधान हटाउन लगाउन पनि उहाँको ध्यान छैन ।’
आन्तरिक रुपमा विवाद बढ्न थालेसँगै दुवै पक्षले बैठकको रणनीति बनाउन छलफल तिब्र पारेका छन् । ओलीले प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेतासँग छलफल गरेका छन् भने ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं आएर नेताहरु मिलाउने भन्दै भेटघाटमा व्यस्त छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि अब निरन्तर पार्टीको नियमित बैठक बस्ने, निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छलफल गरिरहेको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि निरन्तर छलफल गरेकी स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षद्वयसँगै उनले सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छन् । नेकपाको जुनसुकै बैठक वा विवादमा पटक-पटक राष्ट्रपतिको भूमिका देखिने गरेको छ । यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकको समयमा भोजसहितको भेटवार्ताले उनको आलोचना गरिएको थियो ।
ओलीका तीन विकल्प : प्रचण्ड नेपाल पक्षले के गर्ला ?
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरले आ-आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीले सकभर संसदीय दलको बैठकमा बहुमत पुर्याउनका लागि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ । त्यो सम्भव नभएपछि उहाँले बैठकका एजेण्डामा एमसिसी वा सरकारको समीक्षा लगायतका समावेश गर्न चाहनुभएको छैन ।’
अर्का एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘सकभर त उहाँ बुधबार बिहानसम्म बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । यसअघि पनि बिरामी भएर बैठक पटक-पटक स्थगित भएको छ । उहाँहरुको पहिलो रणनीति त्यहीँ हुनेछ । दोस्रोमा उहाँले बैठकको सुरुमा आफ्नो लम्बेतान भाषण राख्ने र संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएर बैठकबाट बाहिर निस्किने तयारी गर्नु भएको छ । तर अब उहाँ उपस्थित भए पनि नभए पनि पार्टी बैठक जसरी पनि बस्छ ।’
ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो एमसिसीका विषयमा सार्वभौम संसदलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । दोस्रो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ज्यूले एमसिसीका विभिन्न विषयमा यसअघि भएका सहमति र सम्झौता गर्नेहरुलाई पनि उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा राख्नुहुन्छ । पार्टीले निर्णय नगरेमा संसदीय दलमार्फत पनि निर्णय हुनसक्छ । तेस्रो संसदबाट अगाडि बढाउने र अवस्था फेस गर्ने नै हुन्छ ।’
सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा समग्र विषयबस्तुमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले परिमार्जन नभएसम्म एमसिसी पार्टीले स्वीकार नगर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रलाई बन्धकी राख्न सकिँदैन । बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’
प्रचण्ड-नेपाल समूहले कुनै पनि हालतमा एमसिसी संसदमा पेश नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संशोधन नभएमा एमसिसी अस्वीकार गर्ने विषयमा पार्टीबाट निर्णय हुने ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले कांग्रेससँग मिलेर सदनबाट अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ । त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन । उहाँले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेसम्म तयारी गरेपछि हामीले कति पर्खिने । अब नेकपाले निर्णय गर्छ ।’
प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएमा अध्यक्षलाईसमेत कारबाही गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएमा कारबाही गरेर अगाडि बढ्नेसम्मको तयारी छ । अरु सबैजना असक्षम, आफू र आफ्नो गुटका व्यक्तिमात्र सक्षम भन्ने कल्चर खराब हो । त्यसैले अब उहाँलाई सुधारको अन्तिम मौका छ ।’
दुवै पक्षको तयारी हेर्दा भोलिदेखि सुरु हुने नेकपा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्ष जस्तो दोहोरी देखिने निश्चित छ । भुसमा जस्तै भित्रभित्रै सल्किँदै आएको नेकपा भित्रको आगो खरबारीको जस्तो बाहिर नै देखिने अवस्थामा पुगेको छ । भोलिको स्थायी कमिटी बैठक एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने पर्व जस्तै बन्ने निश्चित छ ।
स्थायी कमिटीको समीकरणमा को कता ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी समीकरणमा तीनवटा गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालका तीनवटा गुट नेकपामा मुख्य गुटका रुपमा सक्रिय छन् । स्थायी कमिटीको समीकरणमा प्रचण्ड बलिया छन् । हरेक संरचनामा जस्तै तीन मध्ये दुईवटा गुट एक ठाउँ हुँदा अर्को गुट रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ ।
४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड निकट अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पूर्वएमालेबाट २६ र पूर्वमाओवादीबाट १९ जना सदस्य छन् । प्रचण्ड निकट अग्नि सापकोटा सभामुख छन् ।